के तपाईलाई थाहा छ ? माघमा मात्रै आउदैछ ९ अर्बको बोनस, हेर्नुहोस कस्को कती ? – Arthatantra.com
के तपाईलाई थाहा छ ? माघमा मात्रै आउदैछ ९ अर्बको बोनस, हेर्नुहोस कस्को कती ?
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको पुँजिको सिलिङ भेट्नको लागि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु यतीबेला बोनस तथा हकप्रद निष्काशनमा जुटेका छन् । पछिल्लो समय अधिकांश बैङ्क तथा फाईनान्सहरुले हकप्रद तथा बोनसको प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् भने कतिपय पारित गर्ने तयारीमा छन् । अर्थतन्त्रले विभिन्न कम्पनीहरुको बोनस सेयरको बारेमा यो सामाग्री तयार पारेको छ ।
कुन कम्पनीको कती आउदैछ बोनस ?
(१) प्राइम कमर्सियल बैंकको पुस २५ गते सम्पन्न दशौं बार्षिक साधारण सभाले २७ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस बितरण गरेको छ । विराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेको बैंकले गत वैशाख १७ गतेपछाडि सेयरधनी बनेर बोनस पाउने लगानीकर्तालाई भने लाभांस वापतको कर आफैँ तिनुपर्ने जनाएको छ । ६ अर्ब ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको बैंकको बोनस बितरण पश्चात ८ अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुगेको छ ।
(२) फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश सहित बोनस दिने भएको छ । संस्थाले गत बर्षको कमाईबाट वितरण गर्ने बोनस तथा नगद लाभांस घोषणा गरेको हो । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले ५० प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनका लागि १५ प्रतिशत नगद लाभांसगरी कुल ६५ प्रतिशत लाभांस वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको बोनसपछि पुँजी ३० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले गतबर्ष मात्र आइपीओ निष्कासन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले ६ करोड ७८ लाखरुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । फरवार्डको रिजर्भ कोषमा भने ६६ करोड ७६ लाख १६ हजार रुपैयाँ छ ।
(३) स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सेयरधनी लाई ४ अर्ब ५७ लाख रुपैया बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको ३१ औँ बार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई शतप्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकले एफपीओबाट संकलित प्रिमियम र गत आवको नाफाबाट सेयरधनीलाई एक बराबरक एक कित्ता बोनस सेयर वितरण गरेको हो । ४ अर्ब ५७ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको चाटर्डको शतप्रतिशत बोनसपछि बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब एक करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । सो अवधिमा कम्पनीको व्यवसाय २५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
(४) प्रिमियर इन्स्योरेन्सले बाँडफाँडनै नभएको नयाँ साधारण सेयरलाई समेत लाभांस दिने प्रस्ताव गरेको छ । ईन्स्योरेन्सले केही दिन अघिमात्र बिक्री गरेको साढे ६ लाख कित्ता थप नयाँ साधारण सेयर ९एफपीओ० ले समेत पाउनेगरी गतबर्षको कमाईबाट लाभांस घोषणा गरेको छ । कम्पनी संचालक समितिले १३.५२ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांस एफपीओ मार्फत बिक्री गरिएको ६ लाख ५९ हजार पाँच सय ६५ कित्ता सेयरले पनि पाउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले गत पुष १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म एफपीओ बिक्री गरेको थियो । जसको बाँडफाँड हुन अझै एक महिना लाग्नेछ । साथै कम्पनीले उक्त बोनसमा कर बापत लाग्ने ३६ लाख ५९ हजार ७४९ रुपैयाँ नगद लाभांस समेत वितरण गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांस बीमा समितिको स्वीकृति पश्चात आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ ।
(५) नेपाल एसबिआई बैंकले १ अर्ब ८ करोड रुपैया बराबरको बोनस सेयर दिने भएको छ । बैङ्कले १५.४२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बुधबार काठमाण्डौमा बसेको बैंकको २४ औं साधारणसभाले कर प्रयोजनको लागि ०.८१५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ छ । बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी आठ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ नाघ्नेछ ।
(६) कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको ६७३ औं बैठकले साधारण सेयरको २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै बैंकले बोनसमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि १.०५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने जनाएको छ । कृषि विकास बैंकले चालू आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा ३६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर प्रतिसेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ९४ पैसा कायम गरेको छ । बैंकको सेयर सोमबार प्रतिकित्ता ४१४ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
(७) पोखरा फाईनान्सले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ९.५० प्रतिशत बोनस वितरण गर्दैछ । कम्पनी सञ्चालक समितिको ४३९ औं बैठकले सो घोषणा गरेको हो । बोनसपछि फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ७१ करोड ८० लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
(८) सिद्धार्थ बैंकले ९५ करोड ५६ लाख ५६ हजार ४०२ रुपैयाँको बोनस दिने भएको छ । बैङ्कले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने लागेको हो । बोनसपछि बैंकको चुक्ता पूँजी सात अर्ब ७८ करोड १७ लाख ७३ हजार ५५६ रुपैयाँ पुग्नेछ ।